प्रदीप रावल र विशाल चौधरी निर्दोष ? यस्तो छ अहिलेसम्मको सत्य तथ्य – Rastriyapatrika
प्रदीप रावल र विशाल चौधरी निर्दोष ? यस्तो छ अहिलेसम्मको सत्य तथ्य
rastriyapema | December 9, 2018 | Comments
महेन्द्रनगर । निर्मला हत्याकाण्डमा नेपाल प्रहरीले फेरि पनि जालझेल र तिकडम गर्न लागेको पाइएको छ । यसपटक भने प्रहरीको केन्द्रीय नेतृत्वले नै नक्कली (प्रायोजित) अभियुक्त खडा गरेर हत्याकाण्डलाई किनारा गर्ने कोसिस गरेको छ ।
पक्राउ परेका दुई किशोरले हत्याकाण्डमा संलग्नता स्वीकारिसकेका भन्दै प्रहरीले केही सञ्चारमाध्यममा जानकारी चुहाएको छ । काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने एक अखबार केही अनलनइनले १७ वर्षीय प्रदीप रावल र १४ वर्षीय विशाल चौधरीको डीएनए परीक्षण भइरहेको बताएका छन् । दुबैजनालाई केही दिनमैं निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगसहित सार्वजनिक गरिने समाचार प्रहरीले चुहाएको छ ।
के लेख्यो नयाँपत्रिकाले ? नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डनिकट मानिने नयाँपत्रिकाले विगत केही दिनयता निर्मला हत्याकाण्डमा भगतपुरका १७ वर्षीय प्रदीप गिरी, सालघारीका १४ वर्षीय विशाल चौधरी र सालघारीकै दिनेश चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको, प्रदीप र विशालले अपराध स्वीकार गरेको तथा उनीहरुको डीएनए परीक्षण हुँदै गरेको समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ ।
प्रहरी स्रोतलाई उधृत गर्दै सो पत्रिकाले प्रदीपले निर्मलाकाको मुखमा कपडा कोचेर हत्या गरेको स्वीकारेका समाचार प्रकाशन गरेको छ । जबकी पोष्टमार्टम रिपोर्टमा निर्मलाको कण्ठनली भाँचेर हत्या गरिएको उल्लेख छ । पत्रिकाले प्रदीप र निर्मला छिमेकी भएको पनि उल्लेख गरेको छ । प्रदीपलाई काठमाडौंको सुन्धाराबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतको हवाला दिंदै नयाँपत्रिकाले समाचार लेखेको छ ।
नयाँपत्रिकाले नै प्रदीपले विशाल र दिनेशको संलग्नता रहेको बयान दिएपछि बिहीबार दुबैजनालाई पक्राउ गरी काठामाडौं लगिएको उल्लेख गरेको छ । प्रहरी स्रोत भन्दै त्यो पत्रिकाले निर्मलाको हत्या भएकै दिन १० साउनपछि प्रदीप भारततर्फ गएको र अचानक काठमाडौंमा देखिएपछि पक्राउ गरिएको बताएको छ । विशालले अपराध स्वीकार गरेको तर दिनेश निर्दोष रहेको भन्ने प्रहरी कथन पनि शनिबारको नयाँपत्रिकाले लेखेको छ ।
भुलक्कड प्रहरी ! दिलीप विष्ट गिरफ्तारी प्रकरणबाट पनि प्रहरीले कुनै पाठ नसिकेको आभाष पाइएको छ । प्रदीप र विशालको सन्दर्भमा पनि प्रहरीले केही महत्वपूर्ण पक्षको अनुसन्धान नगरेको संकेत प्राप्त भएको छ ।
यहाँनिर …. उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनअनुसार पोष्टमार्टम रिपोर्टमा निर्मलाको हत्या १० साउन अपरान्ह करिब ३ बजे भएको उल्लेख छ । पाले चौधरीका अनुसार प्रदीपलाई प्रहरीले त्यही दिन बिहान करिब १० बजे नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रदीपको बयानका आधारमा प्रहरी अपरान्ह करिब ४ बजे विशालको घर जाँदा उनी घरमैं थिए । घरबाटै विशाललाई प्रहरीले गाडीमा राखेर लगेको आम सर्मती र छरछिमेकले बताएका छन् ।
प्रश्न उठ्छ विहान १० बजे प्रहरीले भगतपुरस्थित मदनआश्रित स्कूलनजिकको पाले चौधरीको मासुपसलबाट गिरफ्तार भएका प्रदीपले चोरीमा विशालको पनि संलग्नता रहेको बयान दिएपछि प्रहरी विशाललाई खोज्न थाल्यो । घरमा लुकेर बसेका विशाललाई घरबाटै प्रहरीले समात्यो । तर, अहिले आएर उनीहरु दुबैजनालाई निर्मलाको बलात्कार र हत्याको अभियोगमा काठामाडौंमा थुनिएको छ ।
भारत भागेका थिएनन् प्रदीप प्रहरीले नयाँपत्रिकालाई चुहाएको समाचर अनुसार प्रदीप १० साउनपछि महेन्द्रनगरबाट गायब भएका थिए । समाचारमा उनी भारत गएको र अचानक काठमाडौंमा देखा परेपछि पक्राउ गरिएको उल्लेख छ । तर, प्रदीप भदौको ११–१२ गतेसम्म महेन्द्रनगरमैं रहेका खुलेको छ । उनी विद्युत प्राधिकरण अगाडिको राई ग्यारेजमा काम गर्थे । १० भदौमा उनले ग्यारेजका साहुबाट दुई हजार रुपैयाँ मागेर काठमाडौं गएका उनका काका बलबहादुरले बताए ।
किन गए प्रदीप काठमाडौं ? काका बलबहादुरका अनुसार प्रदीप भगतपुरकै भोटे राई भन्ने हर्के राईले बोलाएर काठमाडौं गएका हुन् । ‘जरुरी काम छ तुरुन्त आइजा भनेर बोलाएको रहेछ,’ बलबादुरले भने, ‘काठमाडौंमा प्रदीप भोटेसँगै थियो ।’
को हुन् प्रदीप ? १७ वर्षीय प्रदीप महेन्द्रनगरका पुराना वासिन्दा भरबहादुर रावलका नाती हुन् । उनका बुवाको नाम टेकबहादुर रावल हो । ऋण लागेपछि जायजेथा सकिएका टेकबहादुर श्रीमति र अरु सन्तानसहित भारतको बैंगलोरमा छन् । प्रदीप भने बाजेसँगै भगतपुरको कच्ची घरमा बस्दै आएका थिए । उनी नेकपा एमालेका समर्थक थिए र युवा नेता महेश पन्तको अत्यन्त निकट थिए । भोटे भन्ने हर्के राई र महेश अत्यन्त मिल्ने साथी हुन् । प्रदीप भोटेको समेत निकट थिए ।
बलबहादुरको शंका कुखुरा चोरीमा प्रहरी हिरासतमा रहे पनि प्रदीप बलात्कार र हत्यामा संलग्न नभएको काका बलबहादुरको दावी छ । उनी प्रदीपलाई काठमाडौं बोलाएर फसाईको दावी समेत गर्छन् । हर्के राईमार्फत काठमाडौं बोलाएर प्रदीपलाई फसाउन तत्कालिन एमालेका स्थानीय नेताहरुको हात रहेको उनी खुलेरै आरोप लगाउँछन् । ‘उसलाई प्रलोभनमा पारेजस्तो छ, नत्र भने १० साउनमा प्रहरी हिरासतमा रहेको व्यक्तिले कसरी त्यही दिन दिउँसो बलात्कार र हत्या गर्छ ?’ उनको प्रश्न छ । प्रदीपलाई काठमाडौंमा प्रहरीले यातना दिइरहेको आफूले खबर पाएको बलबहादुरको भनाई छ ।
चुहिएको समाचार सत्य हो भने.. नेपाल प्रहरीलाई उधृत गर्दै नयाँपत्रिका दैनिकले छापेको समाचारलाई सत्य मान्ने हो भने प्रहरी फेरि एकपटक जालझेलमा उत्रेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नयाँपत्रिकामार्फत प्रहरीले चुहाएका सूचनामा तमाम असंगति छन् जसबाट प्रदीप र विशाल समेत सिकार बनेका देखिन्छ । ती असंगति निम्नानुसार छन् ः